wararka maanta-arlaadii.net » Senator Abshir Bukhaari oo isku soo sharaxi doono afhayeenka aqalka sare,Yaa la loolami doona?
Senator Abshir Bukhaari oo isku soo sharaxi doono afhayeenka aqalka sare,Yaa la loolami doona?
Senator Abshir Bukhaari oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee ka yimid Galmudug ayaa u sharaxan afhayeenka aqalka sare sida ay ku soo waramayan ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Abshir Bukhaari oo ka mid ah siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee ku xiran ama daacad u ah Dowladda Turkiga ayaa la sheegay inuu durba bilaabay ololaha doorashada, isagoo mideeyay sida la sheegay codadka xubnaha ka yimid Galmudug.
Aqalka Sare ayaa noqon doona meel ay ku loolaman beelaha,Daarood,Hawiye iyo Isaaq maadama dhinacyadaas ay leeyihiin kuraasta ugu badan, halka xubnaha ka yimid koonfurgalbeed ay yihiin kuwa codadkooda lagu xisaabtimi doono ama lagu badsan doono.
Siyaasiyiinta Sedaxdaas beel ayaa dagaal ugu jira in ay ku soo baxaan guddoonka aqlka sare.
Wararka ayaa sheegaya in Senator Abshir Bukhaari sidoo kale la kulmay xubno ka yimid koonfurgalbeed iyo Hirshabeele kana codsaday in ay codka siiyan.
Ninkan ka tirsan urur diimeedka Aala Sheekh, kuna xiran Turkiga ayaa waxaa uu rajo weyn ka qabyaa in loo doorto afhayeenka aqalka sare, waxayna u badan tahay inay tartamaan isaga iyo Juriile oo la sheegay inuu ka mid yahay musharixiinta aqalka sare.
DAAWO Maxaan Ku Xusuusan Doonaa Prof Omar Enow